PS5 အတွက် DualSense အားသွင်းစခန်းနှင့် DualSense Controller [Unboxing] | Gadget သတင်း
PlayStation5၎င်းသည်နို ၀ င်ဘာ ၁၉ ရက်တွင်ကြိုတင်စာရင်းသွင်းနိုင်သည့်ပထမဆုံးသုံးစွဲသူများထံရောက်ရှိလိမ့်မည်။ သို့သော်ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းများကိုမပြည့်စုံစေရန်ဂိမ်းများနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများစွာကိုတစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ်ရွှေ့ဆိုင်းထားသည်။ ဤအရာသည်အရေးကြီးဆုံး PS19 ဆက်စပ်ပစ္စည်းနှစ်ခုအနက်မှနှစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့ရရှိပြီး ဖြစ်၍ ၎င်းတို့အားသင့်အားပြသရန်လိုသည်။
DualSense charging station အသစ်နှင့် PlayStation5DualSense Controller ကိုကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူရှာဖွေပါ။ ဤသူတို့၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့အသေးစိတ်လေ့လာပြီး၎င်းနှင့်ပတ်သက်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအသေးစိတ်လေ့လာပါ။ သင်၏တည်ဆောက်ပုံတွင်မည်သည့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းကိုသင်မလွဲနိုင်ကြောင်းသင်သိစေရန်၎င်းတို့ကိုသင်ပြောပြပြီးဖြစ်သည်။
အခြားဖြစ်ရပ်များတွင်ကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤဆောင်းပါးကိုဗီဒီယိုပုံစံဖြင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်အကြောင်းအရာများနှင့်အတူလိုက်ပါရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ယူကျု့ချန်နယ်တွင်ဤအရာကိုသင်တွေ့ရှိနိုင်သည် DualSense အားသွင်းသည့်စခန်းနှင့် PlayStation5DualSense Controller အသစ်များကိုဖြုတ်ပြီး၊ သင့်ဘဝကိုပိုမိုလွယ်ကူစေမည့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းနှစ်ခုကိုသံသယမရှိဘဲနှင့်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုပ်သံလိုင်းကိုကြည့်ဖို့အကြံပေးလိုပါတယ် ဒါကြောင့်သင်မှာယူသူအသင်းသားများအသိုင်းအဝိုင်းနှင့်ပူးပေါင်းရန်အခွင့်အရေးယူပါ။ ဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ဆန်းစစ်မှုကြောင့်သင့်ဘဝကိုပိုမိုလွယ်ကူစေမည့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဗီဒီယိုများနှင့်ထုတ်ကုန်များကိုယူဆောင်လာနိုင်သည်။
1 PS5 အတွက် DualSense အားသွင်းစခန်း
2 PlayStation5အတွက် DualSense Controller
PS5 အတွက် DualSense အားသွင်းစခန်း
PlayStation4အဆင့်မှာကျွန်တော်သိပ်ပြီးလွဲချော်သွားတဲ့ Sony charging station နဲ့စလိုက်ပါတယ်။ ပထမခြားနားချက်မှာ DualSense Controller သည်ရှေ့ရှိ USB-C charging port အပြင် Joysticks အကြားတံသင်အားသွင်းခြင်းပါ ၀ င်သည်။
ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်ထိန်းချုပ်မှုကိုသဘာဝအနေအထားဖြင့်တင်ဆောင်နိုင်ပြီးအရေးအကြီးဆုံးမှာကေဘယ်လ်နှင့် connector များကဲ့သို့ wear element များကိုမိတ်ဆက်စရာမလိုပါ။ ဤနည်းအားဖြင့်ဝန်သည်ပိုမိုပေါ့ပါးသည်။
၃.၅ မီလီမီတာဂျက်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိသတ္တုတံသင်များကြောင့်ဤနည်းအတိုင်းပင် နားကြပ်အတွက်ဆိုရင်တော့ remote control အနေနဲ့နှစ်ခြင်းခံပြီးအားသွင်းတဲ့ဘူတာကိုသုံးနိုင်မှာဖြစ်ပြီးအဲဒီမှာဆွဲယူနိုင်တဲ့စမ်းရေနှစ်ခုရှိပါတယ်။ Dual Sense ထိန်းချုပ်မှုများကိုထားသောအခါ ၃.၅ မီလီမီတာ Jack သည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဆုပ်ကိုင်မှုကိုပြုလုပ်နိုင်မည့်ဆလင်ဒါအသေးစားတစ်ခုကိုထည့်သွင်းပြီးအားသွင်းလိမ့်မည်။
ဒီအားသွင်းမှုကို USB-C မှတဆင့်မဟုတ်ဘဲအထုပ်ထဲတွင်ပါ ၀ င်သည့်ရှည်လျားသောကေဘယ်ကြိုးဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ဒီကေဘယ်ကြိုးကသူ့ကိုယ်ပိုင် power supply နဲ့ပါလာတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့နှစ်ခုထိန်းချုပ်မှုတွေကိုတစ်ပြိုင်နက်အားသွင်းဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။
အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့် DualSense charging station ကိုဝယ်ပါ LINK.
ဒီကေဘယ်ကြိုးကရှည်ပြီးပါးလွှာတယ် အာရုံစူးစိုက်မှုများစွာမလိုပဲကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သည့် DualSense အားသွင်းစက်ကိုနေရာချနိုင်သည်။ ဤအားသွင်းစက်သည် PS5 နှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သောပုံစံဖြင့်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
၎င်းတွင်မချောသောအခြေခံရှိပြီး Piano Black ပလတ်စတစ်ဖြင့်အလယ်ဗဟိုတွင်ရှိပြီးနှစ်ဖက်စလုံးအတွက်အဖြူရောင်ကြမ်းတမ်းသည်။ အမှန်တရားမှာအားသွင်းရန်အခြေခံသည်အထူးကောင်းမွန်သောဒီဇိုင်းနှင့်ကစားသူအားလုံး၏လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသည်။
စျေးနှုန်းကပြaနာမဖြစ်သင့်ဘူး၊ ဒါကကျွန်တော်တို့ဟာအတော်လေးစျေးပေါတဲ့ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာပဲ။ အမေဇုန် (link) သို့မဟုတ် El Corte Inglésကဲ့သို့သောပုံမှန်အရောင်းနေရာများတွင် ၂၉ ယူရိုမှ ၀ ယ်နိုင်သည်။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ကျွန်တော်လက်မလွှတ်သင့်တဲ့အသုံးအဆောင်တွေထဲကတစ်ခုကငါထင်တာပဲ။
ဤကုန်ပစ္စည်းကို Amazon တွင်အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့်ဝယ်ယူပါ။
အထူးသဖြင့် Sony သည်ပိုမိုအားကောင်းသော charging ယန္တရားကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်အသိုင်းအဝိုင်း၏စကားကိုနားထောင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် charging ports များအားအဆက်မပြတ်ချိုးဖောက်ခြင်းမှထိန်းချုပ်မှုများကိုတားဆီးပေးသည်။ DualShock4တွင်တွေ့ရလေ့ရှိသည့်အရာမှာ၎င်းတို့သည်ကြာရှည်ခံမှုမရှိခြင်းကြောင့်ထင်ရှားသည်။
PlayStation5အတွက် DualSense Controller
သိသာထင်ရှားတဲ့အချက်ကတော့ PlayStation5ကို ၀ ယ်လိုက်တဲ့အခါသူက DualSense Controller ပါလာတာပါ။ တကယ်တော့ PlayStation5မှာ DualSense controller အပြင် USB-A to USB-C cable လည်းပါ ၀ င်ပါတယ်။ DualSense Controller ကိုသီးခြားဝယ်ယူတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရှာမတွေ့နိုင်ပါ။
နည်းပညာဆိုင်ရာစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုလျှော့ချရန် ဆိုနီသည် DualSense box တွင် command နှင့်ညွှန်ကြားချက်လက်စွဲထက် ပို၍ မထည့်ရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ DualSense အားသွင်းစက်ကိုအပြီးသတ်ရန်အပိုထပ်ဆောင်း DualSense အဝေးထိန်းယူနစ်တစ်ခုဝယ်ယူထားပြီ။
ဒီ DualSense Remote ကိုအနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်ပလပ်စတစ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည် စျေးကွက်တွင်လက်ရှိထုတ်ဝေသာထုတ်ဝေ။ အဓိကခလုတ်များသည်ပွင့်လင်း။ အဖြူရောင်ဖြစ်လာပြီးဂန္ထဝင်အရောင်များ (အစိမ်း၊ ပန်း၊ အနီနှင့်အပြာ) ကိုချန်ထားသည်။ ပေါ့ပါးသောအနောက်ဘက်တွင် Sony logo နှင့် USB-C port ကိုသာတွေ့ရသည်။
Amazon တွင် PS5 အတွက် DualSense Controller ကိုဝယ်ပါ LINK.
Joystick ကကျွန်ုပ်တို့ကို DualShock4အကြောင်းများစွာသတိပေးသည် အသစ်တစ်ခုကိုအပြင်ပန်းအားဖြည့်ခြင်းနှင့်အနည်းငယ်ပိုပြီးလိုက်နာရော်ဘာနှင့်အတူ။ ၎င်းတို့ထဲမှကျွန်ုပ်တို့တွင် PS ခလုတ်ရှိသည်၊ ၎င်းသည် PlayStation လိုဂိုအားကိုယ်စားပြုပြီးပတ်ပတ်လည်မှာမရှိတော့ပါ။ ဒီခလုတ်အောက်ကကျွန်တော်တို့မှာရှိတယ် "Mute" ခလုပ်အသစ်တစ်ခု ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားမိုက်ခရိုဖုန်းကိုချက်ချင်းအသံတိတ်စေနိုင်သည်။
သူတို့ရဲ့အစိတ်အပိုင်းအတွက်, Share နှင့် Options ကိုခလုတ် သူတို့ကလိုဂိုကိုပြောင်းလဲနေတုန်းပဲ။ trackpad သည် DualShock4ကဲ့သို့တူညီသောနည်းလမ်းဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ခွင့်ပြုမည့်အလယ်ဗဟိုအဆင့်တွင်ရှိသည်။ ယခုလက်ရှိ trackpad ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ရှိသော light light ring သည်နောက်ကျောကိုလုံးလုံးလျားလျားချန်ထားခဲ့သည်။
အောက်ခြေမှာ ၃.၅ မီလီမီတာ Jack port ရှိမယ် မည်သည့်နားကြပ်အမျိုးအစားကိုမဆိုအလွယ်တကူထည့်သွင်း။ ပိုမိုစျေးကြီးသောရွေးချယ်စရာများမလိုအပ်ဘဲထည့်သွင်းနိုင်သည်။ DualSense charging station အတွက် charging pin များသည်ဤနေရာတွင်တည်ရှိသည်။
နောက်ဆုံးတွင်ဤ DualSense သည် iPhone 12 Pro တွင်ဖြစ်သကဲ့သို့ haptic intelligent တုန်ခါမှုစနစ်ကိုထည့်သွင်းထားသည် (ဥပမာအားဖြင့်) အဘယ်သူ၏ပထမ ဦး ဆုံးဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားအလွန်ကောင်းသောရလဒ်များကိုပါပြီ။ Controller ရှိအပြန်အလှန်အာရုံခံကိရိယာနှင့်အရှိန်မြှင့်မီတာနှင့်လည်းအလားတူပင်။
နောက်ကျောကိုဂန္တ ၀ င် PlayStation ခလုတ်များကိုကိုယ်စားပြုသောကြမ်းတမ်းသောပလတ်စတစ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ command ကိုလည်းထားခဲ့ပါ DualSense အမြဲတမ်းဖျက်ပစ်ခံရခြင်းတက်အဆုံးသတ်သောပုံမှန်နောက်ဘက်စတစ်ကာ။ နောက်ဆုံး၌ငါတို့တွင်စပီကာတစ်ခုသာရှိသေးသည်၊ ဝေးလံခေါင်ဖျားပေါ်တွင်သေးငယ်သောမိုက်ကရိုဖုန်းလည်းရှိသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » PS5 အတွက် DualSense အားသွင်းစခန်းနှင့် DualSense Controller [Unboxing]
၀ န်ထုပ်မှုပြီးဆုံးချိန်တွင်ထိန်းချုပ်မှုကို load စင်တာတွင်တပ်ဆင်ထားနိုင်သည်ကိုသင်သိပါသလား။
အကယ်၍ ကျန်ရှိနေပါက၎င်းသည်ဘက်ထရီ၏အသုံး ၀ င်မှုကိုလျော့ကျစေသည်။
Paco L ကို Gutierrez ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ပြproblemနာမရှိပါဘူး၊ အားသွင်းတဲ့နေရာမှာအမြဲထားရှိပြီးသင်လိုအပ်တဲ့အခါမှသာယူနိုင်ပါတယ်၊ ဘက်ထရီအားသွင်းတာနဲ့အားပြန်သွင်းနိုင်ပါတယ်။
Paco L Gutiérrezအားပြန်ပြောပါ
အမေဇုံပဲ့တင်သံသည်ဒီဇိုင်းနှင့် Dolby Atmos နှင့်ကိုက်ညီသည်။